Companylọ Ọrụ Ìhè Street Solar | Gbasara anyị | Goldsuno
ODM & OEM na-emepụta ngwaahịa maka anyanwụ na-ebute ngwaahịa ọkụ.
Ghaa Wardcape Lights
Emi odude ke Longhua District, Shenzhen, Guangdong Province, China, na-esote golf golf doro anya nke ụwa (Guanlan Golf Course). E guzobere ụlọ ọrụ ahụ na 2008 ma nwee ntọala 2 manu-facturing. Factorylọ ọrụ mbụ bụ maka ngwaahịa ọkụ ọkụ R& D, imewe, nzukọ na ule; Nke abụọ factory bụ maka ngwaahịa ebu imewe na shei manu-facturing. Na mbido afọ 2019, anyị hiwere otu ụlọ ọrụ na Bangkok, Thailand, nke nwere mkpokọta karịa 10,000 square mita. Production bụ kpam kpam dị na mba quality usoro lSO2015.
Companylọ ọrụ ahụ lekwasịrị anya na mmepe ọkụ ọkụ ọkụ, imepụta, imepụta na ịre ahịa maka ihe karịrị afọ 12. Imirikiti ngwaahịa na ngwa na-arụpụta onwe ha ma mezie ya, yana nnabata nchọpụta onwe ha, ọtụtụ ngwaahịa nwere akwụkwọ UL, ETL, TUV, SAA na Energy Star.
Usoro ngwaahịa ndị ahụ gụnyere ọkụ ọkụ ime ụlọ dị ka ọkụ, ọkụ ọkụ na ọkụ ụlọ. Ikanam n'èzí ngwaahịa na-gụnyere integrated integrated n'okporo ámá ọkụ, odida obodo ọkụ na mgbidi ọkụ. A na-ebupụ ngwaahịa ndị a na North America, Europe, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na mba ndị ọzọ na mpaghara ndị ọzọ, na-ere ahịa kwa afọ karịa nde 3, ndị ahịa niile na-anabatakwa ya nke ọma.
Companylọ ọrụ ahụ dabere na ịnye ọrụ ODM na OEM maka ụdị ndị isi ụwa, na-enye ndị ahịa ngwaahịa dị elu, ma ndị ahịa tụkwasịrị ya ogologo oge.
Anyị na-achọ ịkwado ọrụ gị, ihe ị chọrọ, yana ọbụlagodi mmefu ego ọ bụla ị na-anwa ịnọ n'ime. Anyị ga-achọta azịza ga-adabara gị mkpa. Enwere ike ịjupụta mpempe akwụkwọ dị n'okpuru ebe a, ọkachamara na-enwu ọkụ ga-alaghachikwute gị n'ime awa 24. Ma ọ bụ ị nwere ike ịkpọ ozugbo na + 86-18819261803 iji gwa onye ọkachamara ọkụ.
Ọ bụrụ n’inwee ajụjụ ndị ọzọ, degara anyị akwụkwọ